သွားဘက်ဆိုင်ရာပြုစုသူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | China သွားဘက်ဆိုင်ရာစက်ရုံ
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကို Double Head Toothbrush
သတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်ချက်များသွားဘက်ဆိုင်ရာခြေချောင်းသွားတိုက်တံအမျိုးအစား NO ။ TB203 အရောင်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်း PP အရွယ်အစား 225 * 18 * 28mm အလေးချိန် 9g MOQ 2000PCS အထုပ် / တံဆိပ်စိတ်ကြိုက်ငွေပေးချေမှု L / C, T, T, Paypal တင်ပို့ခြင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ FOB, EXW အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှစ် ဦး ခေါင်းမှသွားတိုက်ဆေး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှစ် ဦး ၏သွားတိုက်တံကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု 1. အကောင်းဆုံးစျေး - အများဆုံးပေးသောကုန်ပစ္စည်းများသည်ပေးသွင်းသူများအကြားကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းဖြင့် 2. အမြန်ပို့ဆောင်မှု ...
1. သွားဘက်ဆိုင်ရာခြေချောင်းသွားတိုက်တံသည်သင်၏ပါးစပ်တွင်းသွားများကိုသန့်ရှင်းစေ။ ဖြူဖွေးစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပါးစပ်ရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အသက်ရှူမြန်စေရန်လတ်ဆတ်သောသွားဖုံးနှင့်သွားကျောက်တည်ခြင်းကိုလျှော့ချပေးသည့်သွားဖုံးသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့စေရန်ဤသွားဘက်ဆိုင်ရာတံတားသည်သွားဘက်ဆိုင်ရာတံဆိပ်ဖြစ်သည်။
2. သူတို့ကအလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သောနေရာများတွင်ပင်သင်၏လက်ချောင်းပေါ်တွင်စုတ်တံများကိုထိန်းထားသည့်ချောမွေ့သောဒီဇိုင်းပါရှိသည်။ ဖြီးတစ်ခုစီကိုအသေးငယ်ဆုံးနှင့်အလတ်စားလက်ချောင်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
သွားဘက်ဆိုင်ရာခွေးသွားတိုက်တံကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ၁၀၀% သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်လုံခြုံသည်။
1. စျေးကွက်ရှိအခြားခွေးသွားတိုက်တံထုတ်ကုန်များနှင့်မတူဘဲဤခွေးသုံးကောင်ခေါင်းရှိအိမ်သုတ်ကောင် စုတ်တံသုံးစုံဖြင့်သင်သည်အပြင်ဘက်၊ အတွင်းပိုင်းနှင့်သွား၏ထိပ်ကိုတပြိုင်တည်းသန့်ရှင်းပစ်နိုင်သည်။
ဒီဖြီး၏အထူး ဦး ခေါင်းသည်ခွေး၏အသွားနှင့်သွားဖုံးမှအစားအစာနှင့်ဘက်တီးရီးယားများကိုဖယ်ထုတ်ရာ၌ပိုမိုထိရောက်သည်။
1.Dog Finger သွားတိုက်တံသည်သွားဖုံးများကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်နေစဉ်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏သွားများမှပြားနှင့်အစားအစာအပျက်အစီးများကိုညင်ညင်သာသာဖယ်ရှားပေးသည်။
2.Pog finger သွားတိုက်တံသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ၏သွားများမှပြားနှင့်အစားအစာအပျက်အစီးများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ နူးညံ့သောရော်ဘာပျော့ပျောင်းမှုသည်သင်နှင့်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်အဆင်ပြေစေသည်။
၃။ ပူးတွဲပါ ၀ င်သည့်လက်စွပ်သည်ခွေးလက်ချောင်းသွားတိုက်တံကိုသင်၏လက်ချောင်းပေါ်တွင်ချည်နှောင်ထားခြင်းဖြင့်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်ဖြီးကိုအမြဲထားရှိပေးသည်။